Isimo sokuthuthuka namathemba okufaka isicelo ezindwangu ezi-elekthronikhi ezihlakaniphile
Izindwangu ze-elekthronikhi ezihlakaniphile, ikakhulukazi izindwangu ezigqokekayo ezihlakaniphile, zinezici zokukhanya nokuthamba, induduzo enhle, ukuguqulwa kwamandla okuhle nokusebenza kwesitoreji, nokuhlanganiswa okuphezulu. Bakhombise amathuba amaningi amasha kanye namandla amakhulu wohlelo lokusebenza emikhakheni ehlukene ye ...
Izixazululo Zokungalingani Kokudla kweFayibha neSpandex Jersey Fabric Curling
Ungayixazulula kanjani inkinga yokungalingani kokudla kwe-fiber ohlangothini lwezinaliti zokunitha ekukhiqizeni uboya bokufakelwa be-jacquard? Kumshini wokuluka oyindilinga we-jacquard, ngemuva kokuthi izinaliti zokuluka zixhunywe ukuthatha i-fiber, kukhona okusele okuvunguza "ibhande le-fiber" ku-t ...
Ama-oda aba "amazambane ashisayo" ezinkampanini zendwangu eChina
Muva nje, ngenxa yokwanda kwamacala aqinisekisiwe e-Covid-19 e-Southeast Asia efana neVietnam, imboni yezokukhiqiza ingabuyela eChina ngokwengxenye. Ezinye izinto zikhonjiswa kwezohwebo, kanye nokuthi ukukhiqizwa kubuyile. Ucwaningo lwakamuva olwenziwe nguMnyango Wezohwebo lukhombisa ukuthi cishe ama-4 ...
Ungaxhumana kanjani ngempumelelo ngaphakathi kwebhizinisi
Ukuxhumana akusewona nje umsebenzi “othambile”. Ukuxhumana kungathuthukisa ukusebenza kwenkampani futhi kuqhube impumelelo yebhizinisi. Singakusungula kanjani ukuxhumana okuphumelelayo futhi sishintshe ukuphathwa? Okusemqoka: Ukuqonda isiko nokuziphatha Inhloso yokuxhumana ngempumelelo kanye ...
Imithwalo yezimpahla yaseChina-US isikhuphuke yaze yafika kuma-dollar ayizinkulungwane ezingama-20 000, kuzoqhubeka isikhathi esingakanani?
Ukuthunyelwa kwamasheya kuthuthukise lo mkhuba kwaqina, nge-Orient Overseas International inyuka ngo-3.66%, kwathi iPacific Shipping yenyuka ngaphezu kuka-3%. Ngokusho kweReuters, ngenxa yokwanda okuqhubekayo kwama-oda wabathengisi ngaphambi kokufika kwesizini yezitolo yase-US, kwanda ingcindezi kwi-suppl yomhlaba ...
Enqubeni yokuluka yomshini wokuluka oyindilinga, lapho umshini uqala futhi ume, kwesinye isikhathi kuzokhiqizwa indilinga yamamaki avundlile engxenyeni yendwangu, ngokuvamile ebizwa ngokuthi yi-stop mark. Ukwenzeka kwamamaki okuphumula kuhlobene nalezi zizathu ezilandelayo: 1) Kukhona i-g ...
Idatha yokuthekelisa yendwangu nezambatho yaseChina ekhishwe engxenyeni yokuqala yonyaka
Ngokwemininingwane ekhishwe yiGeneral Administration of Customs ngoJulayi 13, ukuthunyelwa kwendwangu nezambatho eChina kugcine ukukhula okuzinzile engxenyeni yokuqala yonyaka. Ngokuya nge-RMB kanye ne-US dollars, bakhuphuke ngo-3.3% no-11.9% ngokulandelana esikhathini esifanayo ngonyaka odlule, no-mai ...
Ukuhlaziywa kwezidingo zekhwalithi nezinkinga ezivamile zokusetshenziswa kwezinaliti eziyisiyingi (2)
5) Gqoka ohlangothini lolimi nesipuni (A) Ukucaciswa namamodeli wezinaliti zokuluka kusetshenziswe ngendlela engafanele, futhi ubukhulu bukhulu kakhulu. (B). Ukuma okulinganayo kwezinaliti zokwaluka ezingenhla nezingezansi akulungile; uma kuwumshini owodwa wejezi, kungenzeka ukuthi usinki ...
Ukuhlaziywa kwezidingo zekhwalithi nezinkinga ezivamile zokusetshenziswa kwezinaliti eziyindilinga eziyindilinga (1)
1. Izidingo zekhwalithi zezinaliti zokuluka eziyindilinga 1) Ukungaguquguquki kwezinaliti zokuluka. (A) Ukungaguquguquki kwengaphambili nangemuva nangakwesobunxele nangakwesokudla kohlangothi lomzimba wenaliti eceleni kwezinaliti zokuluka (B) ukungaguquguquki kosayizi wengwegwe (C) ukuvumelana kwebanga ukusuka kusit ...
Indawo eshisayo 丨 Isiphepho yonke indlela! Izinto zokusetshenziswa ziyahlanya, amanani entengo efektri "alungiswa nsuku zonke", futhi inkathi yokukhiqiza ephakeme iyeza?
I-2021 isakhethe kakhulu izimboni eziningi, ngoba selokhu kuqale lo nyaka, izimpahla eziningi zingenise ukukhuphuka kwentengo. Kubukeka sengathi, ngaphandle kwentengo yengulube, eyehlayo, amanani ezinye izimpahla ayenyuka. Kubandakanya izidingo zansuku zonke, iphepha langasese, i-aquati ...
I-Knitting Trend I Amaphethini Akhanyayo Akhanyayo! Ake ube ngumfana omuhle kakhulu kulo mgwaqo!
Amaphethini okunitha okubamba amehlo ahlanganisa ukwakheka, umbala nokuthungwa endaweni eyodwa, okukhombisa ithalente nobuhle bomklami. Umphumela odonsa amehlo utholakala ngamaphethini endawo enkulu nokuhluka okusobala kombala, okugqamisa izici ze-avant-garde. I g yamanje ...
I-UPF215BC ceramic split yarn feeder
Isingeniso Ukukhethwa kwezinto ezisezingeni eliphakeme ze-ceramic nokusetshenziswa kobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza nokucubungula kunika amandla i-UPF215BC feeder yensimbi ukuthi ibe nemisebenzi emihle kakhulu enjengokunemba okuphezulu nokumelana nokugqoka okuhle, okungahlangabezana kahle nezidingo zokuqedwa komhlaba kanye ne-w .. .